‘मैले मान्छेलाई चेतना होस् भनेर बोल्ने हो, प्राविधिक कुरामा मात्र बोलेको हुँ’ – डा. पुन – Everest Pati
काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले टेकु अस्पतालका सरूवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार साँझ स्पष्टिकरणको लागि टेकु अस्पतालमा पत्र पठाएको हो।
अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख रूपनारायण खतिवडाले मन्त्रालयबाट पत्र आएको भए पनि आफूले पत्र खोलेर हेर्न नपाएको बताए। उनले भने, ‘पत्र हिजो साँझ आएको रै’छ। म बाहिर थिएँ। अब भोलि पत्र खोलेर हेरेपछि व्यहोरा थाहा हुन्छ।’
उनले पत्र नहेरी अहिले नै केही भन्न नसकिने जनाए। टेकु अस्पतालकै एक अधिकारीका अनुसार उक्त पत्र डा. पुनकै नाममा आएको हो। सोबारे त्यहाँ अनौपचारिक कुराकानी समेत भइसकेको छ। पछिल्लो समय कोरोनाको विषयलाई लिएर अनावश्यक रूपमा सञ्चार माध्यममा बोलेको भन्दै डा. पुनसँग मन्त्रालय रूष्ट छ।
डा. पुनले पत्र आफ्नै नाममा आएको बताउँदै भने, ‘पहिल्यैदेखि मन्त्रालयले मलाई लक्षित गरिरहेको थियो। ढुक्क छु पत्र मलाई नै आएको हो।’ उनले आफूले मानिसमा चेतना जगाएको कुरा मन्त्रालयका केही व्यक्तिले नसहेको बताए।
‘कुरा स्पष्ट छ। म अगाडि देखिएको कुरा केहीलाई मन परेन,’ उनले भने। पुनले आफू मन्त्रालयलाई स्पष्टिकरण दिन तयार रहेको जनाए। उनले आफूले अनावश्यक कुरा नबोलेको भन्दै जस्तोसुकै प्रश्नको पनि सामना गर्ने बताए।
‘मैले मान्छेलाई चेतना होस् भनेर बोल्ने हो। प्राविधिक कुरामा मात्र बोलेको हुँ’ उनले भने, ‘त्यस्तो हो भने भोलिदेखि मुटु, किड्नी सबैको विशेषज्ञलाई बोल्न रोक्नुपर्‍यो।’ उनले बाँकी कुरा मन्त्रालयमा गएपछि थाहा हुने बताए। पत्र आएपछि जानुपर्छ। अब भोलि गएपछि बाँकी कुरा थाहा हुन्छ,’ डा. पुनले भने।
नेपालमा संक्रमित बढ्दैमा चिन्ता गर्नु पर्दैन